ibsashada diyaaradda Maraykanka lagu sameeyo ee qarada weyn ee Boeing ee Shiinaha ayaa durba joojiyay iibkii maraykanka | Biyoguurenews.com
Home Wararka ibsashada diyaaradda Maraykanka lagu sameeyo ee qarada weyn ee Boeing ee Shiinaha...
ibsashada diyaaradda Maraykanka lagu sameeyo ee qarada weyn ee Boeing ee Shiinaha ayaa durba joojiyay iibkii maraykanka
Iibsashada diyaaradda Maraykanka lagu sameeyo ee qarada weyn ee Boeing ee Shiinaha ayaa qeyb ka ah heshiiska ay Maraykanka iyo Shiinaha ka gaareen hardankii ganacsiga ee muddada bilaha ka dhaxeeyay labada dal sida uu sheegay agaasime u hadlay shirkaddan.
Dagaal mindi-mindi ku taag ah oo ka dhaxeeyay labadan dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa hoos u dhigay macaashka iyo korordha dhaqaalaha guud ahaan adduunka, arrintaas oo sidoo kale daldaloolo halis ah ku furtay shirkadda Boeing oo sheegata in ay tahay badeecadda ugu muhiimsan ee uu Maraykanka dibadda u dhoofiyo si ay qeyb uga noqoto suuqa faa’iidada badan ee maalin kasta sii kordhaya ee gaadiidka cirka.
Meel ka mid ah saddex meelood diyaaradaha maroodiga la’eg ee 737 ee ay Boeing soo saarto ayaa waxaa laga iibiyaa macaamiil ku sugan dalka Shiinaha.
Maareeyaha Guud ee Shirkaddan Dennis Muilenburg ayaa u sheegay ka qeybgalayaasha shir duulista hawada sare looga hadlayo oo Washington ka qabsoomay in uu dareemay in wadahadalada Shiinaha iyo Maraykanka ay cagta saareen dhabbo wanaagsan.
Waxa laga soo xigtay in uu sheegay in labada dal ay isla jeexjeexayaan xeerarka iyo shaxaha jirrida adage e xuquuqda lahaanshiyaha maskax-maalka ama Intellectual property waxa loo yaqaano ee la xiriira in qof kasta lagu ixtiraamo, loona dhawro wax soosaarka ku yimid curinta maskaxeed.
Dowladaha ayaa caadi ahaan heshiisyada xagga gaadiidka cirka u isticmaala sidii ay ku xasilin lahaayeen isfaham dublamaasiyadeed oo gudo balaaran.
Saraakiisha Maraykanka ee gorgortan ku jira ee Beijing ku sugan ayaa dalbaday in Shiinaha ay shaaca ka cadeyso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan balanqaadka Shiinaha ee ah in ay badeecooyin badan ka iibsato Maraykanka.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Shiinaha ka codsaday in ay dhimaan karaar-dhaafka ama isu dheelitirnaan la’aanta ganacsiga ka dhaxeeya labada dal, kaas oo sannadkii 2018-kii gaaray $419 bilyan oo doolar.
Shiinaha ayaa lagu wadaa in ay Maraykanka ka qaaddo kaalinta koowaad ee suuqa gaadiidka cirka 10-ka sanno ee soo socota , isaga oo soo xaabsanaya diyaaradaha Maraykanka ee Boeing iyo tan Yurub laga leeyahay ee Airbus SE.
Shirkadda Boeing ayaa odoraysa in dalabka shiinaha ee diyaaraha uu noqon doono 7,700 diyaaradood oo kuwa waaweyn ah 20-ka sanno ee soo socda, kuwaas oo qiimo ahaan ku fadhiya $1.2 Trillion oo doolar.
Previous articleBERBERA, Wasiirka cayaraha Somaliland oo iyo Heer calamiya oo Booqday Berbera
Next articleHogaamiyihii Ururkii daalibaan oo Maraykanku Xukunka ka Tuuray, raadinayayna Aya la ogaaday in uu ku noolaa mudadii nolashiisa uga hadhasanayd dhisme ku dhow saldhig miltari